Umqeqeshi wamanqindi odumileyo uGeorge Vaughan ubhengeza umhlala phantsi
Iziphumo eziPhilayo zomdlalo wamanqindi kunye neMisitho
16 EyoMsintsi 2021
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	UGeorge Vaughan, MTK	0
Umqeqeshi wamanqindi odumileyo UGeorge Vaughan ubhengeze umhlala phantsi kwezemidlalo emva kwembasa entle - ethathe ixesha elingaphaya kweminyaka engama-60.
Umsebenzi kaVaughan kuqeqesho lomdlalo wamanqindi waqala ngo-Lee Jones ngaphambi kokudlulela kwiRotunda, kwaye khange kuthathe ixesha elide u-'Georgie 'ukufezekisa iziphumo ezilungileyo, ukuba nefuthe kwangoko kwiklabhu.
Impumelelo yakhe njengomqeqeshi yaqala xa waphumelela yonke into enokwenzeka kwinqanaba likazwelonke, ukuba nomntwana wesikolo, ojunior, kunye neentshatsheli eziphezulu kwii-ABAs, ekwenza kucace kwasekuqaleni ukuba uVaughan wayeyitalente ekhethekileyo xa kuziwa kumdlalo wamanqindi.
Waqeqesha amawaka amajoni kwiLiverpool, kwaye waba ngumqeqeshi welinye ilizwe eNgilane, ngokubalaseleyo okuzayo ngo-1980, xa wayeqeqesha amanye amaScousers uJoey Frost kunye noTony Willis kwii-Olimpiki zowe-1980 eMoscow, noWillis egoduka nembasa yobhedu.
UVaughan uqhubeke nokusebenza ejikeleza iiklabhu eLiverpool, ephumelela yonke into ixesha kunye nexesha, ngaphambi kokuba abe ngumqeqeshi oqeqeshiweyo, enempumelelo engakumbi emayilandelwe.
Waqeqesha amanye amajoni amahle awakhe abonwa yiLiverpool, kubandakanya abakwaSmith Brothers, uDerry Mathews, uJazza Dickens, noAndy Holligan, uGary Thornhill, uPeter Culshaw kunye nabanye, noVaughan efaka ulwazi lwakhe olukhulu kubo kwaye ebanceda ukuba baphume emandleni ukomelela kwimisebenzi yabo eyahlukeneyo.
Yayingengobalweli kuphela abathi uVaughan wanceda ekuqaliseni umdlalo, kunye nenani labaqeqeshi bamanqindi bekwanika nembali yeLiverpool ngokubaqalisa kumdlalo wamanqindi, kubandakanya nabaqeqeshi beQela le-GB uPaul Walmsley noJimmy Albertina, kunye nomqeqeshi wase-Australia uKevin Smith.
Ukuzibophelela kukaVaughan kunye nenkonzo yakhe kumdlalo wamanqindi kumenze wahlonitshwa kwindalo yonke kwezemidlalo, engenangqondo engenangqondo kwindawo yokuzivocavoca evumela abo balwayo ukuba bafezekise amandla abo, ngelixa bekwanceda ukukhupha abantwana esitratweni kwaye babanike ubomi obungcono.
Wayesoloko ephambi kwexesha lakhe kwaye engazange akhuthazwe yimali, kunye nothando kunye nothando lomlo wamanqindi oqhuba impumelelo kaVaughan, ekhokelela kuye ekuphumeleleni amabhanti amaninzi njengomqeqeshi, kubandakanya iBritane, iCommonwealth, iYurophu kunye nokunye.
Iqhina lakhe kwiLiverpool liya kuzinziswa kwimbali ngonaphakade, aphumelele amabhaso amaBritane amathandathu kunye ne-Scousers kuwo wonke umsebenzi wakhe wobungcali, kunye nesihloko se-WBU kunye noDerry Mathews ngelixa ibiyibhanti eyaziwayo ngokupheleleyo.
UMathews wayengomnye wabalwi uVaughan wayekufuphi kuye, kunye noJazza Dickens, kwaye bobabini banike imbeko kwiqhawe labo ngento abenzele yona.
Mathews wathi: “Ndiqala ngaphi kwaye ndigqibela phi. Wonke umntu uyazi ukuba uGeorge uthetha ntoni kum. Uthetha umhlaba kum kwaye ndisathetha naye yonke imihla kwaye ndisazakumbona mihla le.
“Kule minyaka ingama-20 idlulileyo bendithetha naye yonke imihla, kwaye into ayenzele mna nosapho lwam, awukwazanga ukuyithenga. Uyimpembelelo yam, iqabane lam elihle, kunye negaffer yam.
Ungumntu okhetheke kakhulu kwaye uyacinywa. Iyamangalisa into ayenzele abantu kumdlalo wamanqindi. Ayisiyiintshatsheli kuphela, kodwa nabantwana esitratweni. Unabantu kwii-Olimpiki, wabanceda baphumelela ii-ABAs, izihloko zaseBritane kunye nezihloko zehlabathi.
“Uphatha wonke umntu ngokufanayo, akukho nonyango lukhethekileyo kuye nabani na. Kube lilungelo ukuba phantsi kwephiko lakhe kunye nenombolo yakhe yesibini kwindawo yokuzivocavoca. Ndingumntu onebhongo kakhulu kwaye ndiyazingca ngaye.
“Ndinethamsanqa lokuba ndihlala ekoneni kuphela kuye kwaye ndimtyelele yonke imihla, kwaye ndingafumana iingcebiso ngabalwi endizakubadlulisa. Lixesha elibuhlungu lokusishiya kwakhe, kodwa usinike onke awona maxesha mahle kumdlalo wamanqindi.
“Esixekweni kufanele ukuba kubekho umfanekiso oqingqiweyo wakhe, kuba akukho mntu eLiverpool angazange awaqeqeshe. Uyintsomi, kwaye ayikho enye into endinokuyithetha. NguGaffer, inkosi. Akukho hlabathi lichazayo ukuba unamandla kangakanani. Uyathandwa sithi sonke. ”
UDickens wathi: “Ixesha lam noGeorgie yayiyeyona minyaka imnandi ebomini bam. Umdlalo wamanqindi okanye akunjalo ndizukile ukuba ndabelana ngawo naye. Umsebenzi wakhe wokuziphatha, ukomelela, ukuzinikela kunye nokuzinikela kunokunconywa kuphela.
“Ukuba ndingathatha umhlala-phantsi ndinodumo olufana nolwakhe ndingayindoda eyonwabileyo. Ndiyakuthanda ukusebenza naye kodwa ixesha endiza kulichitha ngaphandle kwendawo yokuzivocavoca lixabiso.
“Asinguye wonke umntu onethamsanqa ngokwaneleyo lokulazi elo cala likaGeorge, ukuba ebengakhetha ukubonisa amajelo eendaba oko abonisa abahlobo bakhe kunye nosapho ebeya kuba yintshatsheli. Ndiya kuhlala ndinombulelo ongazenzisiyo xa ndisithi ndiyamazi uGeorgie Vaughan umqeqeshi, indoda kunye nomhlobo. ”
Ilifa likaGeorgie kumdlalo wamanqindi ngoku liyaqhubeka ngonyana wakhe, uDanny Vaughan, kunye nomzukulwana wakhe, uDominic Vaughan, bobabini abaqeqeshi abahloniphekileyo ngokwabo, njengoko bejonge ukwenza uGeorgie azingce kwaye agcine igama likaVaughan liqhubeka, nalo lisusela emva I-1800 kwezemidlalo.
UVaughan ngoku uthatha umhlala phantsi eneminyaka engama-83 emva kokuzinikela ubomi bakhe bonke kwezemidlalo, kodwa uyakuhlala ehlonitshwa kwaye ethandwa ngokunceda ukuphucula ubomi babantu ngaphezulu kweminyaka engama-60. Enkosi kuMphathi.
Bhalisa kwi-new yethu Isiteshi se-YouTube ukuqala kungekudala ngeendaba zamanqindi kunye neziphumo zamva nje, ukuhleba kunye nolwazi oluvela kwihlabathi liphela. Cofa nje umfanekiso ongezantsi okanye nayiphi na imifanekiso kuyo yonke imidiya yethu yoluntu:
Uluhlu lweminyhadala yamanqindi esiza kuyigubungela bukhoma kunye nekhadi elibonisa ukuba alikho semthethweni (umsitho ophambili), cofa le khonkco ilandelayo Iziphumo zaManqindi ngoku
Rhuma kwiFightzone yomdlalo wamanqindi weveki enkulu- nje yi- $ 4.99 ngenyanga (sebenzisa ikhowudi 'boxen247')
UBrandon Figueroa vs.Stephen Fulton Jr uhlehlise umhla we-27 kaNovemba	UDillian Whyte wadibana no-Otto Wallin waseSweden eLondon nge-30 ka-Okthobha
I-22-1 uJeovanis Barraza waya kumxholo othi "Ezantsi kunye noMdaka" eMelrose ngo-Okthobha u-29
Ngale mini: URaúl Pérez woyisa uGeorge Avila e-Inglewood, eCalifornia
I-"Triple Crown of Boxing" imilo ye-3 yobuntshatsheli behlabathi-1 ngokuhlwa kuphela
U-Yésica Bopp ugcine igama lakhe le-WBA ngokuchasene noJohana Zúñiga
UDewayne Beamon woyisa uJose Farfan webhanti le-WBA-Fedecaribe